China Malaysia- SIRIM Sevhisi uye Kuyedza | MCM
Zvekuchengetedzwa kwemunhu nepfuma, hurumende yeMalaysia inogadzira chigadzirwa chitupa sisitimu uye inoisa yekutarisa pazvinhu zvemagetsi, ruzivo & multimedia uye zvekuvakisa zvinhu. Zvigadzirwa zvinodzorwa zvinogona kuendeswa kuMalaysia chete mushure mekuwana chitupa chechigadzirwa uye kunyorera.
SIRIM QAS, inotsigirwa chose-chose neMalasian Institute of Industry Standards, ndiyo chete yakasarudzika chitupa cheMalasian nyika inodzora vamiririri (KDPNHEP, SKMM, nezvimwewo).
Iyo yechipiri bhatiri certification inosarudzwa neKDPNHEP (Malaysian Ministry yeDomestic Trade uye Consumer Affairs) seye chete chitupa chiremera. Parizvino, vagadziri, vatengesi kunze kwenyika uye vatengesi vanogona kunyorera chitupa kune SIRIM QAS uye kunyorera kuyedzwa uye kupihwa zvitupa zvechipiri pasi peiri rezinesi rezinesi.
IRSIRIM Certification- Sekondari Bhatiri
Sekondari bhatiri parizvino riri pasi pekuzvidira certification asi ichave iri muchiyero chekumanikidzwa certification munguva pfupi. Zuva chairo rinosungirwa riri pasi peyemutemo yekuzivisa yeMalasian nguva. SIRIM QAS yatotanga kugamuchira zvikumbiro zvechitupa.
Sekondari bhatiri certification Standard: MS IEC 62133: 2017 kana IEC 62133: 2012
● Yakagadzira mukana wakanaka wehunyanzvi hwekutsinhana uye ruzivo rwekuchinjana ruzivo neSIRIM QAS iyo yakapa nyanzvi kuti igadzirise zvirongwa zveMMM nekubvunza chete uye kugovana ruzivo rwechizvino-zvino rwenzvimbo ino.
● SIRIM QAS inoziva data reMMM rekuyedza kuitira kuti masampuli aongororwe muMMM pachinzvimbo chekuendesa kuMalaysia.
● Kupa rubatsiro rwekumira-kumwe kweMalasian certification yemabhatiri, maadapter uye nhare mbozha.
● Makore gumi ane ruzivo muindasitiri yebhatiri uye ine simba timu tekinoroji inogona kupa vatengi nehunyanzvi hwepasirese chitupa package mabasa
Pashure: Vietnam- MIC
Malaysia Sirim Chitupa
Malaysia Sirim Certification Mutengo
Malaysia Sirim Certification Maitiro
Malaysia Sirim Nguva Yekutungamira
Malaysia Sirim Chirevo
Malaysia Sirim technical Zvinyorwa
Malaysia Sirim Bvunzo Zvinhu
Malaysia Sirim Bvunzo Nzira
Malaysia Sirim Bvunzo Yekuongorora
Malaysia Sirim Yekuyedza Mutengo
Malaysia Sirim Kuyedza Service
Malaysia Sirim Kuedza Nguva